Rasmi: Filimka Amar Akbar Anthony oo tiyaatarada ka dagay Ravi Teja filimkiisa wuu bur buray! – Filimside.net
Rasmi: Filimka Amar Akbar Anthony oo tiyaatarada ka dagay Ravi Teja filimkiisa wuu bur buray!
Mass Maharaja Ravi Teja xili wacan kuma jiro waana inuu iska fiiriyaa fariimaha uu dooranayo madaama dhawaanahan aflaantiisa inta badan ganacsi ahaan fashilmayaan haatana waxaa culeeska kusii kordhiyay filimkiisa ugu dambeeyay Amar Akbar Anthony kaasi oo ganacsi ahaan bur buray.
Filimka Amar Akbar Anthony Ravi Teja waxaa la jishay atirshada Ileana D’Cruz oo mudo lix sano kadib fanka Telugu ama Tollywood dib ugu soo laabatay waxaana tiyaatarada la saaray 16 Novembe 2018.
Filimka Amar Akbar Anthony oo tiyaatarada mar hore ka dagay wuxuu soo xareeyay 12.50 Crore ganacsigiisa dibad iyo dal la isku daray sida shabakada Andhra Boxoffice soo daabacday waxayna kooxda cajaladaha qeybiyaan saami ahaan ka heleen 6.20 Crore.
Kooxda cajaladaha qeybiyaan waxay ku iibsadeen filimka Amar Akbar Anthony 22 Crore sidaa darteed 28.2% ayuu dib usoo celiyay lacagihii filimkan lagu iibsaday waana filim sedex laab bur buray Triple Disaster madaama sedex meelood lacagtii lagu iibsaday hal meel ka mid ah uu soo celiyay!
Fadlan hoos kaga bogo filimka Amar Akbar Anthony suuq walbo ganacsiga uu ka sameeyay madaama uu tiyaatarada isaga dagay waxaana xogtiisa soo daabacday shanakada Andhra Boxoffice (ABO):
Dhul weynaha Telugu AP/Nizam wuxuu ka keenay 10 Crore, saamiga laga helay 5.40 Crore
USA Boxoffice wuxuu ka keenay 0.80 Crore, saamiga laga helay 0.25 Crore
Dunida inteeda kale wuxuu ka keenay 1.70 Crore, saamiga laga helay 0.55 Crore
Wadarta Guud Lacagaha Uu Keenay Dibad iyo Dal 12.50 Crore, Saamiga Guud Laga Helay Dibadi iyo Dal 6.20 Crore
Osmaan ahmed bocor says:
Runtii aniga hadi an ka hadlo filimka Ravi teja waa filim super hit ah Ravi teja guul wacan